FARITRA ANALANJIROFO : Mpiara-miasa akaiky amin’ny Governora miteraka resabe
Raha tsiahivina, ny 23 jolay lasa teo no nahavoatendry ny governoran’ny Faritra Analanjirofo, Dr Randriamanantena Marcellin. 4 août 2020
Ny 30 jolay no vita ny famindram-pahefana teo aminy sy ny lehiben’ny Faritra mpisolo toerana. Eo am-pamolavolana ireo handrafitra ny kabinetrany ity governora vaovao ity, amin’izao fotoana izao. Hita mibaribary ny fisian’ny olona efa naloan’ny vahoakan’i Toamasina, izay mipetaka sy manakaiky ny Governoran’ny Faritra Analanjirofo kosa ankehitriny.
Lehilahy roa efa nandrafitra ireo mpikambana tao amin’ny fiadidiana ny kaominina Toamasina ambonivohitra, tamin’ny fotoana nitantanan’ny Filohan’ny Delegasiona Manokana an’ny tanànan’i Toamasina Razafimanana Christin no hita fa anisany tanan-kavanan’ilay governoran’ Analanjirofo. Izy roa lahy ireo izay efa nokianin’ny vahoakan’i Toamasina fatratra tamin’ny fomba fitantanana sy fitondran-tena nandritra nitantanan’ izy ireo tao amin’ny kaominina Toamasina. Maro, noho izany, no tsy mankasitraka ny hidiran’ireo olona efa naloan’ny vahoakan’i Toamasina ireo ao anatin’ ny fitantanana ny Faritra Analanjirofo.
Mampiaka-peo fatratra amin’izao zava-misy izao ireo vato nasondrotry ny tany any amin’ity Faritra ity ary miantso ny governora mba tsy hanaiky tsindry isan-karazany sy mba tena hahay hisafidy ireo olona mbola madio tanana. Resabe tanteraka any Analanjirofo moa ny momba azy roa lahy ireo, amin’izao fotoana izao. Efa hita miara-dia isan’andro amin’ny governora vaovao. Izy ireo izay efa namahatra tanteraka ao Fenoarivo-Atsinanana miandry fanendrena ofisialy.